ရွှေဘောလုံးဆု အတွက် ရေပန်းစားမှုမှာ မက်ဆီ ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းကျော်တက်လာတဲ့ လီဝန်ဒေါ့စကီး - xyznews.co
ရွှေဘောလုံးဆု အတွက် ရေပန်းစားမှုမှာ မက်ဆီ ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းကျော်တက်လာတဲ့ လီဝန်ဒေါ့စကီး
၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွက် ရွှေဘောလုံး ဆုပေးပွဲကျင်းပဖို့ တဖြည်းဖြည်း နီးကပ် လာပါပြီ ။ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ မှာ ပြုလုပ်မယ့် ဒီဆုပေးပွဲ အတွက် လီယွန်နယ် မက်ဆီ က အောက်တိုဘာ အစပိုင်းလောက်ထိ ရေပန်း စားနေခဲ့ တာပါ ။
ဒါပေမယ့် နိုဝင်ဘာ ပထမ အပတ် ကုန်ခါနီးမှာတော့ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရောဘတ် လီဝန်ဒေါ့စကီး က အွန်လိုင်းရေပန်းစားမှုမှာ နံပါတ် ၁ နေရာကို ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ ပါတယ် ။
လီဝန်ဒေါ့စကီး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် က ဖီဖာ နဲ့ ယူအီးအက်ဖ်အေ တို့ရဲ့ တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆုတွေကို ရခဲ့ ပေမယ့် ရွှေဘောလုံးဆု ကတော့ ဖျက်သိမ်း လိုက်တာကြောင့် မရရှိခဲ့ ပါဘူး ။
ပိုလန်သားကြီးဟာ အဆိုပါ ရာသီမှာ ဘိုင်ယန် နဲ့ အတူ ဘွန်ဒစ်လီဂါ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် နဲ့ ပိုကယ် ရှုံးထွက် ဖလားတွေကို ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနှစ် မှာလည်း လီဝန်ဒေါ့စကီး ဟာ ၂၀၂၀ တုန်းကလောက် ဆုဖလားတွေ မရခဲ့ ပေမယ့် တကိုယ်တော် စွမ်းဆောင်မှု မှာတော့ ပိုမို တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ရွှေဘောလုံး ဆုပြိုင်ပွဲ ရဲ့ ထိပ်ဆုံး နေရာမှာ ဆက်လက် တည်ရှိ နေခဲ့ ပါတယ် ။
လီဝန်ဒေါ့စကီး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက ဘိုင်ယန် နဲ့ အမှတ်ပေး ဖလား ရခဲ့သလို ပြည်တွင်း မှာရော ဥရောပ မှာပါ ရွှေဖိနပ်ဆုတွေကို ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီရာသီ မှာလည်း လီဝန်ဒေါ့စကီး တယောက် ဂိုးသွင်းအား ကောင်းနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ၈ ဂိုး နဲ့ ဦးဆောင်နေသလို ပြည်တွင်း လိဂ် မှာလည်း ၁၂ ဂိုး အထိ သွင်းယူ ထားခဲ့ ပါတယ် ။
မက်ဆီ ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီက ဘာစီလိုနာ နဲ့ ပြည်တွင်း ရှုံးထွက် ဖလား ၁ ခု ၊ ပြည်တွင်း ရွှေဖိနပ်ဆု တခု ကို ရခဲ့ ပါတယ် ။ နွေရာသီ မှာတော့ မက်ဆီ ဟာ အာဂျင်တီးနား နဲ့ ကိုပါ အမေရိက ဖလားကြီးကို ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ပြီး သူ့ဘ၀ မှာ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံ အသင်းနဲ့ ရယူတဲ့ အဓိက ဆုဖလား ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီဆုဖလား ဟာ မက်ဆီ ကို ရွှေဘောလုံးဆု အတွက် ရေပန်းစားမှုမှာ အဆင့် ၅ နေရာကနေ အဆင့် ၁ နေရာအထိ ခုန်တက် သွားစေခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် နဲ့ ယူရို ဖလား ပိုင်ရှင် ဂျော်ဂျင်ဟို ၊ ဥရောပ ရွှေဖိနပ်ဆုရှင် လီဝန်ဒေါ့စကီး တို့ ထက် နှာတဖျား အသာ ရရှိစေခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် ဘောလုံးရာသီ မှာတော့ အသင်းသစ် ကို ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့မှု မှာ အသားမကျသေးမှုတွေ နဲ့ အတူ မက်ဆီ တယောက် ခြေစွမ်းပြဖို့ ရုန်းကန် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ဟာ ခုချိန် အထိ ပြင်သစ်လိဂ် မှာ ဂိုး မသွင်း နိုင်သေးပါဘူး ။ ချန်ပီယံလိဂ် မှာတော့ ၃ ဂိုး သွင်းယူထားပြီး ဒဏ်ရာ ပြဿနာကြောင့် နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲ ကို လွဲချော် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒီလို အချိန်မှာ လီဝန်ဒေါ့စကီး ဟာ အပတ်တိုင်း ခြေစွမ်းပြ ဂိုးတွေ သွင်းလာပြီး ရေပန်စားမှု မှာ မက်ဆီ ကို တဖြည်းဖြည်း ကျော်တက် လာနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ရွှေဘောလုံး ဆုပေးပွဲ ကျင်းပဖို့ ရက်ပေါင်း ၂၄ ရက်သာ လိုတော့တဲ့ အချိန် မှာတော့ လီဝန်ဒေါ့စကီး က နံပါတ် ၁ နေရာက ရေပန်းစားသူ ဖြစ်လာခဲ့ ပါပြီ ။
ဒါပေမယ့် ဒီလို အွန်လိုင်းပေါ်က ရေပန်းစားမှုဟာ ဆုပေးပွဲ ကို ဘယ်လိုမှ သက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး ။ နိုင်ငံ တကာ က လက်ရွေးစင် အသင်း နည်းပြ နဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်တွေ ၊ ဥရောပ တလွှားက ထိပ်တန်း သတင်းဌာနက ဂျာနယ်လစ်တွေ ရဲ့ မဲပေးမှုတွေ ဟာ အောက်တိုဘာ လ ကုန်လောက် ကတည်းက ဆုပေးပွဲ ကျင်းပမယ့် France Football ရုံးချုပ်ကို ရောက်ရှိ ထားခဲ့ပြီးသားပါ ။
ယမန်နေ့က France Football က လူတွေနဲ့ သိကျွမ်းရင်းနှီးတဲ့ ဂျာနယ်လစ် တဦးဟာ ဒီနှစ် အတွက် ဆု ကို မက်ဆီ ရရှိမယ်လို့ ကြိုတင် ပေါက်ကြား ပြောဆို ခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် အထိတော့ လီဝန်ဒေါ့စကီး ၊ မက်ဆီ နဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟို တို့ အကြားမှာ ဘယ်သူက ပိုထိုက်တန်တယ် ဆိုတာကို ငြင်းခုန် နေကြဆဲပါပဲ ။
မက်ဆီ ဟာ ဆုဖလား နဲ့ တဦးချင်း စွမ်းဆောင်ရည် ၂ မျိုးစလုံးမှာ အားကောင်းခဲ့ ပါတယ် ။
လီဝန်ဒေါ့စကီး ကတော့ ဆုဖလား မှာ မက်ဆီ ကို မယှဉ်နိုင်ပေမယ့် ရေပန်းအစားဆုံး ၃ ယောက်ထဲမှာ စွမ်းဆောင်မှု အကောင်းဆုံး ၊ တောက်လျောက် ခြေအမှန်ဆုံး ကစားသမားလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။
ဂျော်ဂျင်ဟို ကတော့ ဂိုးသွင်းရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ၂ ယောက် နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကို ယှဉ်ပြောဖို့ ခက်ပေမယ့် ဆုဖလား ရယူနိုင်မှု မှာတော့ ကျန် ၂ ယောက်ထက် သာလွန်မှု ရှိနေပါတယ် ။
သေချာတာ ကတော့ ဒီနှစ် ဆုပေးပွဲဟာ ငြင်းခုန်ရမှု အများဆုံး နဲ့ ( ဆုပေးပွဲ အပြီးမှာလည်း ) ဝေဖန်သံ အကျယ်ဆုံး ထွက်ပေါ်လာ နိုင်တဲ့ နှစ်တနှစ် ဖြစ်နေမှာပါ ။
Winner ကို သိရဖို့ ကတော့ တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာပါပြီ . . .
Previous Article Ballon D’Or ဆုနဲ့ ထိုက်တန်မှု အရှိဆုံး ကစားသမား တဦးကို ရွေးချယ်ရင်း ၊ ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ဂျော်ဂျင်ဟို ပါဝင်ခဲ့ခြင်း အပေါ် မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ ရီယို ဖာဒီနန်
Next Article အက်ဒီဟောင်း ကို နည်းပြသစ် ခန့်အပ်နိုင်ဖို့ လက်တစ်ကမ်း အလို ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ နယူးကာဆယ်